Dr.ဆာဆာ နှင့် ကမ္ဘာ့မီဒီယာ CNN သတင်းဌာန Interview သတင်းထူး သတင်းကောင်း – Shwe Thadin
Dr.ဆာဆာ နှင့် ကမ္ဘာ့မီဒီယာ CNN သတင်းဌာန Interview သတင်းထူး သတင်းကောင်း
စစ်ကောင်စီကို ကမ္ဘာ့သံတမန်ရေးမှာ နောက်ကောက်ချနိုင်ခဲ့တဲ့ NUGအစိုးရရဲ့အောင်ပွဲ
၁။ မေးခွန်း= Dr.ဆာဆာ အခု မြန်မာပြည်ရဲ့ အခြေနေကဘယ်ဖြစ်နေပြီလဲ ကမ္ဘာကြီးကိုပြောပြပါအုံးအဖြေ= ဒီအချိန်ဟာ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာပြည်သူတွေ အဆိုးဆုံး အခြေနေကို ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည် အလှပဆုံး အကောင်းဆုံးအခြေအနေက လက်တစ်ကမ်းမှာဆိုတာ ကျွန်တော် ယုံကြည်ပါတယ်။
၂။မေးခွန်း= အခုဆိုရင် Dr. ဆာဆာတို့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေက အောင်မြင်နေတယ်ကမ္ဘာ့အကြီးမာဆုံး အင်အားနှင့် ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ G7အဖွဲ့ကတောင် Dr. ဆာဆာတို့ NUG အစိုးရ လက်ခံထားတယ် ဒါဘာကြောင့်လို့ ထင်သလဲ?
အဖြေ= ဒါကတော့ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပါ ကျွန်တော်တို့ NUG အစိုးရက ပြည်သူကနေ ပေါက်ဖွားလာတာပါ( ၅၄) သောပြည်သူက မဲပေးရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ လွတ်တော်အမတ်တွေနှင့် ဖွဲ့စည်းထားတာပါ
သူတို့အနေနဲ့ ပြည်သူက တင်မြောက်ထားတဲ့ အစိုးရကို ပြစ်ဖယ်လို့မရပါဘူး။ လက်နက်အားကိုးနှင့် အုပ်ချုပ်ကြေးဆိုရင် အမေရိကန်က ကမ္ဘာတစ်ခုလုံးကို အုပ်ချုပ်တော့မှာပေါ့ ပြည်သူလက်ခံဖို့သာ အဓိကပါ။၃။ မေးခွန်း= စစ်အာဏာသိမ်းအဖွဲ့က သူတို့ ရူံးနေပြီ ရူံးနေမှန်သိလျှက်နှင့် ဘာလို့ စစ်ရာဇာဝတ်မူတွေ ဆက်ကျူးလွန်နေတယ်။ လူ့အခွင့်အရေးတွေလည် ဆက်ချိုးဖောက်နေတယ် ။ ကျွန်မတို့ သတင်းဌာန ဥက္ကဋ္ဌကိုယ်တိုင် မြန်မာပြည်သတင်းသွားယူတော့ သူတို့က ကမ္ဘာကိုလိမ်ဖို့ ကြိုးစားနေတယ် ဒါတွေက သူတို့ ဘာကြောင့်အဲလို လုပ်တယ်ထင်လဲ?
အဖြေ= အဓိက နံပါတ် (၁) ဒီအာဏာရူး စစ်ခေါင်းဆောင်တွေက အဂ်လိပ်စာမတတ်ကြဘူး ကမ္ဘာကြီးက သူတို့ လုပ်ရပ်ကို ဘာပြောနေသလဲ သူတို့သေချာ မှန်အောင်မသိကြဘူး။ သူတို့ရဲ့ စကားပြန်တွေက အမှန်တိုင်းမပြောပြဘူးနှင့်တူပါတယ်။
နံပါတ် (၂)အချက်က သူတို့ရဲ့ ကျူးလွန်မူတွေဟာ ISIS တွေထပ် ပိုဆိုးကြောင်း ကမ္ဘာကြီးကို သက်သေပြလိုက်တာပဲ။အဆိုးဆုံးကတော့ ပြည်သူတွေရဲ့ မဲပေးမူကို အလေးမထား တန်ဖိုးမထားတာပဲ။၄။မေးခွန်း= အခုဆိုရင် Dr. ဆာဆာတို့ NUGရဲ့ လူပ်ရှားမူတွေ အောင်မြင်နေတယ်။အင်အားလည် ကြီးထွားလာတယ်။ အနောက်ဆုံးသတ်က ဘယ်လိုဖြစ်သွားနိူင်လဲ
အဖြေ= ဒါကတော့ အာဏာသိမ်း စစ်ခေါင်းဆောင်တွေ ဖမ်းဆီးထားတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့် အပါဝင် မတရားအဖမ်းခံရတဲ့ပြည်သူတွေ မလွတ်မချင်း၊ တိုင်ပြည် အာဏာကိုပြန်မလွဲမချင်း ကျွန်တော်တို့ဘက်က သေနတ်နဲ့
ထောက်တိုင်း အညံ့ခံပြီး နောက်ဆုတ်မှာမဟုတ်သလို တော်လှန်ရေးကလည် ရပ်သွားမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင်လည် အသက်ရှိနေသ၍ စစ်အာဏာရှင်လက်အောက်မှာ ဘယ်တော့မှနေမှာပါမဟုတ်ပါဘူး အဆုံးထိ တော်လှန်ကြမှာပါပြည်သူတွေကလည် ထိုနည်းအတူပါပဲ။ အဆုံးသတ်ကတော့ ပြည်သူတွေပဲ သေချာပေါက်အနိူင်ရမှာပါ။၅။မေးခွန်း = အခုချိန်ထိ ချီးနာက စစ်တပ်ဘက်က ရပ်တည်ပေးနေသေးတယ်။ကမ္ဘာကြီးကိုလည် ချီးနာက တစ်ခါမှအမှန်တိုင်းပြောလေ့မရှိဘူး။ ဒါဘာကြောင့်လို့ ထင်လဲအဖြေ= ဒါကတော့ ချီးနာက မြန်မာစစ်အာဏာရူး ခေါင်းဆောင်တွေနှင့်
ပေါင်းပြီးတော့ ပြည်သူပိုင် အဖိုးတန် ပစ္စည်း ရတနာ တွေကို မှောင်ခိုဈေးနှင့် အရောင်းအဝယ်လုပ်လာကြတာနှစ်ပေါင်း( ၆၀)ကျော်နေပြီ မြန်မာပြည်ရဲ့ ထွက်ကုန်အားလုံးကို သူတို့ လက်အုပ်ကြီး ချုပ်ချင်ကြတာ ဒါကြောင့်လို့ပဲ ထင်ပါတယ်။
အခုလို မေးခွန်းတိုင်းကို ဖြေကြားပေးတဲ့ Dr. ဆာဆာကို ကျွန်မတို့ CNN သတင်းဌာန က ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ ကျွန်တော်လည် ထပ်တူကျေးဇူးတင်ပါတယ် ခင်ဗျာ။မြန်မာတွင် ဒီမိုကရေစီသည် လွှမ်းမို့လိမ့်မည်။တရားမျှတမူကလွမ်းမိုးလိမ့်မည်။
Federal ပြည်ထောင်စုကြီး ပေါ်ပေါက်လိမ့်မည်။
Federal တပ်မတော်သည် ထွန်းကားလိမ့်မည်။
မြန်မာပြည်ကြီး ဘုရားသခင် ကောင်းချီးပေးပါစေ။
Democracy will prevail in Myanmar.
A federal union will emerge.
The Federal Army will flourish.
The uprising must be won.
God bless Myanmar.
အခုလိုအချိန်ပေးပြီး ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ ပရိသတ်ကြီး အားလုံးလည်းသာယာပျော်ရွှင်သော နေ့လေးကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလိုဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
စီဒီအမ်လုပ်ပြီး သုံးဘီးဆိုင်ကယ်မောင်းတဲ့ အာဇာနည်ဆရာမလေး